DEG DEG: israsaaseyn goordhaw ka dhacday Muqdisho iyo Rag Bambooyin & Bistoolada wata oo la qabtay. | Allbanaadir News	DEG DEG: israsaaseyn goordhaw ka dhacday Muqdisho iyo Rag Bambooyin & Bistoolada wata oo la qabtay.
DEG DEG: israsaaseyn goordhaw ka dhacday Muqdisho iyo Rag Bambooyin & Bistoolada wata oo la qabtay.
Israsaaseyn kooban ayaa galabta casar gaabadkii ku dhexmartay magaalada Muqdisho gaar ahaan meel ku dhow buundada Ansalooti ee degmada Waaberi ciidamada xasilinta iyo dabley hubeysan.
Goob-joogayaal ayaa sheegay in iska horimaadku uu bilowday markii ciidamo xasilinta oo bar control ku leh buundada Ansalooti ay joojiyeen labo nin oo ay ka shakiyeen.
“Ragga laga shakiyey markii la joojiyey bastoolado ayey iska soo jareen, waxayna rasaas kooban isweydaarsadeen ciidamada xasilinta, iyagoo isku dayey iney baxsadaan, midkoodnma wuxuu ku cararay dugsi quraan” ayuu yiri goob jooge halkaas ku dhowaa.
Masuuliyiin ka tirsan Maamulka degmada Waaberi ayaa xaqiijiyey in labo nin oo la dagaalamay ciidamada xasilinta lagu qabtay dhacdadaas, haatana ay ku jiraan iyaga iyo hubkooda gacanta ciidamada amaanka.
Waxay kaloo intaa ku dareen masuuliyiyiintu in labada nin ee la qabtay midkood uu ku dhaawacmay israsaaseynta dhexmartay iyaga iyo ciidamada amaanka, iyagoo xusay in sidoo kale gacanta lagu dhigay bastoolado iyo bambooyin ay wateen.
Saraakiisha laamaha amaanka ayaan illaa hadda ka hadlin iska horimaadkan ka dhacay degmada Waaberi, waxayna tani ku soo aadeysaa xilli 24-kii saac ee ugu dambeeyey ay Muqdisho ka dhaceen dilalkii ugu badnaa.